Tsy voahaja ny zo ao Toliara: mirongatra ny fampiasana ankizy tsy ampy taona | NewsMada
Tsy voahaja ny zo ao Toliara: mirongatra ny fampiasana ankizy tsy ampy taona
Toy ny olon-drehetra ihany, tsy afa-bela amin’ny fiantraikan’ny valanaretina covid-19 eto Madagasikara koa ny ankizy. Toy ny hita any amin’ny faritra hafa manerana ny Nosy, miaina sy mizaka ny vokatr’izany ny ankizy eto Toliara, indrindra amin’ny tanàn-dehibe. Mirongatra, mihamitombo isa ankehitriny ireo ankizy tsy ampy taona tazana mivarobarotra eny an-dalambe rehetra eny.
Araka ny fanadihadiana natao tamin’izy ireny, voatery manao izao asa izao izy ireo noho ny fahasahiranan’ny ray aman-dreniny. Tsy fidiny ho azy ireo izany, kanefa tsy maintsy atao, sitrany ahay mba hanampiana ny fidiram-bolan’ny ray aman-dreniny. Ny sasany, miainga ao an-trano manomboka amin’ny valo ora maraina ary tsy mody raha tsy any amin’ny dimy ora tolakandro, fe-potoana farany ahafahan’ny mpivarotra manao ny asany. Tsy afaka mody, araka izany, ny antoandro fa amin’izay mofo, na zavatra hafa hamidiny no anombinana kely atao ody am-bavafo.
Azo itarafana sahady ny loza mety hihatra amin’ireo ankizy manoloana izao fihanaky ny valanaretina covid-19 izany toe-javatra iainany izany. Tsy maintsy mivoaka ny trano isan’andro manao ny asam-barotra mandehandeha manerana ny tanàna. Ny sakafo tsy zarizary. “Sakafo ambany foitra”, tokoa araka ny fitenenana. Miankina amin’izay mba vola kely azo amin’ny varotra atao ny hividianana ny sakafo hariva. Mbola tsy maintsy hanombinana, hanomanana ny varotra atao ny ampitso koa anefa izay azo. Dia tena tonga tokoa amin’ilay fitenenana mahazatra manao hoe “ny hohanina androany, tadiavina androany”. Matetika, vary sosoa fotsiny no atao sakafo. Mandry fotsy mihitsy aza indraindray, rehefa tsy mahalafo. Ny ray aman-dreny, raha tsy hidiran-trosa dia bokan’ny trosa.
“Lavitry ny afo ny kitay”
Izao toe-javatra izao dia mampisongadina indray fa maro ny zo fototry ny ankizy tsy voahaja sy voahitsakitsaka. Zo fototra izay mandrara ny fampiasana ny zaza sy ny ankizy tsy ampy taona. Ny mifanohitra amin’izay voalazan’ny Fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon’ny zaza (FIZOZA) no hita miharihary, ankehitriny. Manginy fotsiny ny tsy fisitrahana ny fahazoana fitsaboana sy ny fisitrahana ny sakafo ara-pahasalamana. Ny tena loza dia ny fanaovana sorona ireo ankizy ireo manolana izao valanaretina izao. Ny hany sakana ara-pahasalamana tanterahin’izy ireo dia tsy misy afa tsy ny fanaovana arovava ihany.
Antony iray lehibe mahatonga izao firongatry ny fampiasana ankizy tsy ampy taona amin’ny varotra an-dalambe izao koa ny mbola fiatoan’ny fampianarana. Voatery tsy satry ny ray aman-dreny manery ireo ankizy hanao izao asa izao mba hanampiana ny vola miditra ao an-tokantrano.
Mandra-pahatonga ny fotoana hiverenan’ny fidiran’ny ankizy any an-dakilasy, izay mbola tsy voafaritra mazava na rahoviana na rahoviana, tsy maintsy mbola hitombo hatrany izao fampiasana zaza sy ankizy tsy ampy taona izao.
Fehiny, tsy hihambahambanana ny filazana fa mbola tena lavitry ny afo ny kitay, amin’ny fanajana sy fampanajana ny “Fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon’ny zaza” (Fizoza) eto amintsika. Araka izany, tokony handray ny andraikiny ny rehetra, manomboka amin’ny fitondram-panjakana, ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Tafiditra ao anatin’izany koa ny fiarahamonim-pirenena izay manana andraikitra lehibe amin’izao toe-javatra izao.
Nanatontosa: Christian Manjovelo Sambany